Madaxweynaha Soomaaliya oo Ka qeyb Galaya Shir Madaxeedkii Jaamacada Carabta – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweynaha Soomaaliya oo Ka qeyb Galaya Shir Madaxeedkii Jaamacada Carabta
Shir madaxeedka Jaamacadda Carabta ayaa Beri ka furmaya caasimada The best prices for bentyl are gathered at our store and if you want to take advantage of our deals, as we offer it for only 0.55 USD! dalka Urdun ee Cumaan ,waxaana ka qeyb galaya hogamiyeyaal badan oo ka socda wadamada Jamacadda carabta.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya,ayaa lagu wadaa inuu ka qeyb galo Shirkaasi, iyadoo shirka qodobada looga hadlayo ay ka mid yihiin Abaaraha ka jira Soomaaliya,dhibaatooyinka ay la kulmayaan Falastiniyiinta, dagaalada ka socda Yemen.
Madax ka tirsan Jaamacadda Carabta ayaa sheegay in wadamada Jaamacadda carabta ay si buuxda u taageeri doonaan Dowladda Soomaaliya, islamarkaana ay lacago badan ugu yaboohi doonaan dadka ay Abaaruhu Saameeyeen.
Dhanka kale Wakaalada Wararka ee dalka Urdun ayaa sheegtay in qodobada looga hadlayo shirka ay Soomaaliya uga jirto kaalmaha hore.
Somali-land oo ku howlan aqoonsi Saldhig ku badalasho